> Resource > FCP > ma dajiyaan karaa MP4 galay Final Cut Pro? Xaliyay
Ma cut final MP4 taageero pro? Dhab ahaantii, waxaa la sheegay in ay Final Cut Pro taageertaa MP4, H.264, DV, HDV, 3GP, iwm Haddii aad kara ma furan iyo edit files MP4 on Final Cut Pro, waxaa laga yaabaa in arrinta qaab codec ah. Si loo xaliyo dhibaatadaada, waxaad u baahan tahay in la helo qalab awood leh oo la si gaar ah loogu tala galay Final Cut Pro.
Qeybta 1: Best MP4 in ay Final Cut Pro Converter
Qeybta 2: MP4 Free in ay Final Cut Pro Converter
Qeybta 3: MP4 Online in ay Final Cut Pro Converter
Beddelaan MP4 in ay Final Cut Pro oo iMovie la codecs hooyo sida ProRes, Apple Dhexe codec iyo DNxHD.
Beddelaan MP4 ama ka qaab kasta oo ay ka mid yihiin MOV, MKV, AVI, iyo xataa videos 3D & HD.
Guba videos in qaab kasta oo ay u DVD badan oo arrimo menu dhisay-in.
Beddelaan videos at 30 X dhakhso xawaaraha iyo u tayo khasaaro
OS taageerayaan: Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, Windows 8/7 / XP / Vista
Sida loo badalo videos la MP4 si Final Cut Pro Converter
Tutorial hoose wuxuu ku salaysan yahay Mac OS (Yosemite ka mid ah). Haddii aad rabto in aad Converter video for Windows ah (Windows 10 ka mid ah), riix halkan .
1. Ku dar videos MP4
Orod MP4 si Converter FCP. Guji "File"> "files Media Load ..." menu inay ku shuban MP4 videos ama si toos ah jiidi jeedi files MP4 deegaanka galay Murayaad this app ee. Ka dib markii ay si guul leh u soo degida, waxaad ku eegaan karo videos MP4 ah adigoo gujinaya thumbnails video ah, ama dib-u-diyaarin videos, kuwaas oo ay si xor ah u soo jiiday video bartilmaameedka meeshii aad rabto.
Fiiro gaar ah: Haddii files yihiin segmented iyo aadna doonayso inaad ku wada geeyo galay mid ka mid ah waa weyn ka hor inta aadan soo dhoofsadaan files galay FCP, waqtigan, waxaad bedelan kartaa on the "midowdo" biiro hoose. Isla markiiba, waxaa jiri doona silsilad u dhexeeya laba videos kasta.
2. Dooro FCP sida qaab wax soo saarka
App Tani aad bixisaa qaab filaayo in FCP in ay suuqa kala qaab, iyo sidoo kale ProRes, Apple Dhexe codec iyo fursadaha DNxHD. Halkan, waxaad si toos ah u dooran kartaa horena u filaayo in sida qaab wax soo saarka. Dabcan, waxaad dooran kartaa codec hooyo si encode faylasha aad u sixiddiisa in FCP.
Just riix badhanka arrow hoos hoose ee Murayaad this in la furo ay suuqa kala qaab wax soo saarka. Markaas, waxaad tagtaa "ayeey" category> "Final Cut Pro" ama mid ka mid ah ProRes, Apple Dhexe codec iyo fursadaha DNxHDthe dooran.
3. Start MP4 in ay diinta ka FCP
Markii wax walba la sameeyo, riix "Beddelaan" button ee geeska midig hoose inay ku dhameystaan ​​qaab beddelidda. Inta aad sugeyso, waxay leeyihiin kafeega ama qaado hurdo gaaban ah oo ha Video Converter shuqulka hawsha u sameeyo ee asalka ah. Ka dib markii diinta, app icon dhawri doonaa booda ku xirto ah.
Hadda, aad dajiyaan karaa files wax soo saarka si ay Final Cut Pro si xaalkaa iyadoo wax dhibaato ah. Iyo video wax soo saarka aan hoos u dhigi doontaa tayada video. Iyo Jidka wax soo saarka ayaa durbaba ku qoran xagga hoose ee interface ugu weyn. Waxaad si fudud oo dhaqso heli kartaa faylasha wax soo saarka sida Jidka faylka. Dabcan, waxaad bedeli kartaa waddada file adigu haddii u baahan.
Video Tutorial: Sida loo badalo MP4 in ay Final Cut Pro la Video Converter Ultimate
# 1. Free Video Converter: Wondershare MP4 Converter Free
Iyada oo ay taasi video Converter lacag la'aan ah Final Cut Pro, waxaad si fudud u dajiyaan karaa MP4 in ay Final Cut Pro.
Pro: Free, kharash dheeraad ah ma, interface dareen
1. Waxay leedahay ma presets u Final Cut Pro. Waxaad si toos ah ay u FCP u bedeli karaan.
2. Waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh oo ku saabsan tayada wax soo saarka video ah.
3. Wax macno ah ma ha idin ​​gubi DVD.
Fiiro gaar ah: doonaysaa si ay u xaliyaan aad arrinta video incompatibility fiican uguna habboon? Isku day Video Converter Ultimate.
Sida loo Guba (YouTube) MP4 in iDVD on Mac OS X